गर्नै नहुने काम गर्दा ७ दिन जेल र १६ लाख जरिवानामा ! के गरिन त्यस्तो ? – Online Khabar 24
गर्नै नहुने काम गर्दा ७ दिन जेल र १६ लाख जरिवानामा ! के गरिन त्यस्तो ?
महानगरीय अप’राध महाशाखाले बैंकिङ कसुरको मु’द्दामा १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ७ दिन कैद सजा’य सुनाइएका फ’रार महिलालाई प’क्राउ गरेको छ।
पक्रा’उ पर्नेमा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–६ घर भई काठमाडौं बस्दै आएकी ३२ वर्षीया जस्मिन झा रहेकी छिन् ।
उनलाई महाशाखाले मंगलबार गहना पोखरीबाट प’क्राउ गरेको हो । महाशाखाका अनुसार आ’रोपित झा बैंकिङ कसुरको जाहेरीमा दो’षी ठह’र भएकी थिइन् । २०७७ चैत ११ गते उच्च अ’दालत पाटनले उनलाई दोही ठ’हर गर्दै १६ लाख जरि’वाना र ७ दिन कै’दको स’जाय सुनाएको थियो ।
प’क्राउ परेकी झालाई फै’सला कार्यान्वयका लागि जिल्ला अ’दालतमा काठमाडौंमा उपस्थित गराइ का’रागार पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ।
यस्तै, नेपाल प्रह’रीको केन्द्री’य अनुस’न्धान ब्यूरो (सी’आईबी)ले बैंकि’ङ् क’सूर मु’द्दा (चेक बाउन्स) मा फरा’र रहेका अर्का व्यक्तिलाई प’क्राउ गरेको छ। पक्रा’उ पर्नेमा बारा जिल्ला जीतपुर सिमरा स्थायी घर भई बूढानीलकण्ठ गोल्फुटार बस्ने २६ वर्षीय अनिस सुन्दास रहेका छन् ।
सुन्दासलाई सीआईबीको टोलीले सोमबार काठमाडौँस्थित सुन्दरीजलबाट प’क्राउ गरेको हो। सीआईबीका अनुसार प’क्राउ परेका सुन्दासलाई २०७७।१२।०८ गते उच्च अ’दालत पाटनबाट ७ दिन कैद स’जाय र ७ लाख जरिवा’नाको फै’सला सुनाईएको थियो।
अदा’लातको उक्त फैस’लापछि फ’रार रहेका सुन्दासले पीडी’तलाई आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएपछि झुक्याएर लक्ष्मी बैंकको चेक दिएको सीआईबीका एसपी कमल थापाले जानकारी दिए ।
एसपी थापाका अनुसार सुन्दासलाई बैंकि’ङ्क क’र तथा सजा’य ऐन २०६४ बमोजिमको कसू’रमा सजा’य माग गर्दै ललितपुर जिल्ला अदा’लतमा पेश गरिएको छ। नुवाकोट एक्सप्रेसबाट साभार गरियको खबर
Prevकाठमाडौंको स्वयम्भूबाट सोनाम तामाङ प’क्रा’उ ! श’ङ्का लागेर चेकजाँच गर्दा प्रहरी नै चकित
nextकाठमाडौं उपत्यका वासीका लागि भर्खरै प्रशासनले जारि गर्यो यस्तो सूचना ! अवश्य पढ्नुहोला